စတင်းမွန်းစတား အရောင်းအဝယ် — Steemit
mmunited (60) in community • 19 days ago
စတင်းမွန်းစတား ကဒ်လေးတွေကို ရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက် လုပ်နေရတယ်။ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ကဒ်တွေ ဆို ထုတ်ရောင်းပြီး တန်ဖိုးနည်းတဲ့ ကဒ်လေးတွေ ပြန်ဝယ်ဖြည့်နေရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲ ၈၁ စတင်းတန် ကဒ်တစ်ခု ရောင်းထွက်သွားတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းရောင်းထွက်တဲ့ ကဒ်တွေကတော့ အများကြီးပဲ။ အောက်မှာလင့်ခ်လေးတွေ ချပေးထားပါတယ်။
စုစုပေါင်းဆို တစ်ရာ ကျော်သွားပါပြီ။ စတင်းတွေတော့ အများကြီးရပါတယ်။ စတင်းဈေးကလဲ ကျနေတာကို ရောင်းစရာ ကဒ်တွေလဲ အများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်။ ဈေးလျှော့ပေးလိုက်ရင်တော့ ရောင်းထွက်သွားမှာပါ။
တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ကဒ်တွေရရင် ပီတိဖြစ်ရသလို တန်ဖိုးနည်းတဲ့ ကဒ်တွေရရင်လဲ စိတ်ပျက်ရတတ်ပါတယ်။ ၁၀ ဒေါ်လာ ဆိုတာက တစ်ခါလောက်ကစားရုံနဲ့ ကျေချင်ကျေသွားနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ စတင်းဈေးကကျနေတော့ ဝယ်ဖို့တော့ သိပ်မလွယ်လှဘူးပေါ့။
SM ကစားတာက ပိုစ့်ရေးတင်တာထက် ပိုပြီး တွက်ခြေကိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းစားစရာလဲ မလိုပါဘူး။ ဂိမ်းထိုင်ကစားနေရုံပါပဲ။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ကဒ်တွေကို အဆင့်မြှင့်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အနည်းဆုံး summoner လယ်ဗယ် ၄ လောက်တော့ ရှိနေမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ပထမပိုင်းမှာထဲက ပုံမှန်ကစားတဲ့သူတွေကတော့ အခုအချိန်မှာ summoner လယ်ဗယ် ၄ လောက် ဖြစ်နေပါပြီ။
စတငျးမှနျးစတား ကဒျလေးတှကေို ရောငျးလိုကျဝယျလိုကျ လုပျနရေတယျ။ တနျဖိုးကွီးတဲ့ ကဒျတှေ ဆို ထုတျရောငျးပွီး တနျဖိုးနညျးတဲ့ ကဒျလေးတှေ ပွနျဝယျဖွညျ့နရေတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျကပဲ ၈၁ စတငျးတနျ ကဒျတဈခု ရောငျးထှကျသှားတယျ။ ဒီရကျပိုငျးရောငျးထှကျတဲ့ ကဒျတှကေတော့ အမြားကွီးပဲ။ အောကျမှာလငျ့ချလေးတှေ ခပြေးထားပါတယျ။
စုစုပေါငျးဆို တဈရာ ကြျောသှားပါပွီ။ စတငျးတှတေော့ အမြားကွီးရပါတယျ။ စတငျးဈေးကလဲ ကနြတောကို ရောငျးစရာ ကဒျတှလေဲ အမြားကွီးကနျြနပေါသေးတယျ။ ဈေးလြှော့ပေးလိုကျရငျတော့ ရောငျးထှကျသှားမှာပါ။
တနျဖိုးကွီးတဲ့ ကဒျတှရေရငျ ပီတိဖွဈရသလို တနျဖိုးနညျးတဲ့ ကဒျတှရေရငျလဲ စိတျပကျြရတတျပါတယျ။ ၁၀ ဒျေါလာ ဆိုတာက တဈခါလောကျကစားရုံနဲ့ ကခြေငျြကသြှေားနိုငျပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ စတငျးဈေးကကနြတေော့ ဝယျဖို့တော့ သိပျမလှယျလှဘူးပေါ့။
SM ကစားတာက ပိုဈ့ရေးတငျတာထကျ ပိုပွီး တှကျခွကေိုကျပါတယျ။ ခေါငျးစားစရာလဲ မလိုပါဘူး။ ဂိမျးထိုငျကစားနရေုံပါပဲ။ ကိုယျ့မှာ ရှိတဲ့ ကဒျတှကေို အဆငျ့မွှငျ့ဖို့တော့ လိုပါတယျ။ အနညျးဆုံး summoner လယျဗယျ ၄ လောကျတော့ ရှိနမှေ အဆငျပွမှောပါ။ ပထမပိုငျးမှာထဲက ပုံမှနျကစားတဲ့သူတှကေတော့ အခုအခြိနျမှာ summoner လယျဗယျ ၄ လောကျ ဖွဈနပေါပွီ။
Posted from my blog with SteemPress : https://myanmarpress.xopus.io/?p=703
19 days ago by mmunited (60)
kyawhlaing (58) · 19 days ago
Your UA account score is currently 1.603 which ranks you at #34403 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 62 places in the last three days (old rank 34341).
In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 190 contributions, your post is ranked at #123.